Home Wararka Waa maxay sababta DF iyo Dowlad Goboleedyada si isku mida loogu wada...
Waa maxay sababta DF iyo Dowlad Goboleedyada si isku mida loogu wada qaabilay (Sawiro)
Wafdigii ka socday Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ee u kuurgalayay xaaalada siyaasadeed iyo mida Amni ee dalka ka jirta aya waxa ay maanta booqosho ku kala tageen dhowr dowlad Gobleed halka inta harteyna ay berito tagi doonaan. Maanta waxa ay booqdeen Baydhabo, Baladweyne iyo Xafiiska Ra’iisal Wasaare Kheyre.
Safarakaan loogu qiimeynayo heerka Soomaaliya marayso aya si wada jir ah u wado AU-PSC marka uu dhamaado safarkana waxaa la filayaa in ay soo saaraan warbixin ay la wadaagi doonaa Midowga Afrika and Golaha Amaanka.
Safarka wafdigaan aya waxa sidoo kale loogu talagalay in dowladda Fedaraalka cashar u noqodo taas oo ah dalka iyaga kaliya kama taliyaan. Taas ayaana keentay in madaxda dowlada Fedaraalka lagu kalsoonaan waayay madaama awoodooda ku kooban tahay qaybo ka mida magaalada Muqadishu.
Marka aad daawato sawairada iyo su’aalaha la weydiinayo dhinacyada ay la kulmeen wafdiga waa isku mid. Ra’iisal Wasaare Kheyre ayaa in mudo ah ku faanayay in 27 sano ka dib Dowlad Goboleedyada albaabada laga soo xiray. Hadii albabada laga soo xiray maxa keenay in madaxda dowlad Goboleedyadda loogu tago deeganadooda.
Previous articleOil to cash in Somaliland: a debate whose time has come
Next articleWasiirka Beyle ma wasiir Soomaali u adeegaa mise mid u adeega IMF iyo Bangiga Adduunka (Dhageyso)
Itoobiya oo ay Saraakiil kaga Dhimatay Duqeyntii Baydhabo